ONN: Oromia News Network « QEERROO
February 5, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	3 Comments
« Godina Arsii Anaalee Gara Garaa Keessatti FXG Itti Fufe.
Sagantaan ” TV Gaaddisa Dhugaa” Karaa TV ONN Qilleensa Irraan Darbuuf Qophii Xumuratee Jira. »
Yeron Dhufera says:
Bravo, keep it doing for progress!
ONN Oromoon hundee ilmoo namaa tauusaa sibeksiseen ture. Kana gubbaati gaafiifi deebii ( interview) kenuu babaada hadaraa naqunnami. Bilibilaa 720 882 8369 Bulto.
Oduun mandaraa funananamu seenaa miti. Oduu tarreesuu dura barachuu seenaa baruu barbaachiisa.
Decolonized your mind first.Read read read and read more more
Abbaa haadhaa addamiifi Hawaan Oromoodha.
Oromoon humbuxxii Lucii hundee ilmoo namaatii.
Oromoon hortee Kushii jedhamee wamaama. Seenaa dogoogoraan ykn jallinaan barrahee haajaa taeefi sirraahuu qaba. Uumata Kushi, afaan Kushi, seenaa Kushi, biya Kushi, mootummaa Kushi, qarooma Kushi,amanttii Kushi hajedhamuu hundutuu han Oromooti. Kush hortee Oromooti. Uummaanni hortee Kush jedhaman hundumtuu hortee Oromooti. Oromoon abbaa seenaa hundee llmoo namaati.
Seenan ani wagga 8 qoradhee barreessee seenaa kanan dura barrahee adunnaa gubbaatti facae hunuduma diigeeti seenaa haraa uummtaa adunaa barsiisaa gara fuludura. Oromon Kushi irraa akka hinuumanee ragaa qabatamaa baayeetu jiraa ilaalaa. Abaabilen Kushi Maatusaa. Akaakileen Kushi Lameechi. Akaakayun Kushi Nobaa (Nuhi). Abban Kush Kaam. Maatuusaan Laamchi dhalche. Laameechi Noba dhalche. Noba Kam dhalche. Kam Kushi dhalche.
Maattiisaan 3,313 BC keessa dhalate.
Lameechi 3,126 BC keessa dhalate.
Noobaan/ Nuhi 2,944 BC keessa dhalate.
Kam 2,334 BC keessa dhalate.
Kush 2,167 BC keessa dhalate.
Akka ragaa qabatamaa kanaattii Oromoon kush irraa hin umamne. Abaabilee Akaakilee, Akakayuun kush otoo hindhalatiin waggaa 200,0000 dura Oromoon gaanfaa Afrikaa keessaati babalatee jiracha ture. 8000 BC Oromoon biyoottii ammaa Itophiyaafii Sudaan jedhamanii waamaman haandhuura ykn wiirtuu godhateeti keessaa jiraachaa ture. 7500 BC Nubiya mgalaa qaramaa jedhamu keessaatii qaroomaa (Civilization) hojjechaa ture. Nugufnii Ormaa (Orii) jedhamu 4,733 BC keessaa biyyaa Itophiyaa durii bulcaa ture. Akka ragaa kanaattii Kushi otoo hindhalatiin waggaa 2,167 dura Oromoon nugusan bula turee. 4000 BC calqabee hammaa Jaaraa 3ffaattii biyya Itophiyaa durii keessaatti nugusootaa 203 qaba ture.
Oromoon Kushi otoo hinuumamiin uummaata jiraata tauu braa seenaa dogogooraa kessaa baha uummaata barsiisaa hortee kushu jechuu dhiisaa. Kush hidda Oromoo 37 gubbati argama. Abaabilee akaakilee akkaakayuun abbaan Kushi otoo hindhalattin Oromoo Itophiyaa duri, Nubiyaa, Gibixii, Baabiiloon, Hindi, keessaati qaroomaa hojeechaa turee. Wagga 7000 dura Amanttii waaqeefftaati bulaa ture. Wagga 3000BC keessa biyya Hindiiti amanttii Budihizimtti bulas ture. 4000 BC keessa Oromoon seera Demokirasiitiin bulaa ture. 4000 BC keessa biyya Balioolniti fooqii Babieel jedhamu ijaaree. Fooqii han ijaare nugusa Oromoo Namorod. Maqaan ijoollummaa isaa Caaluu jedhama. 5000 BC uummannii Kama’ati Gibixi keessaati qaroomaa hojechaa ture. 4000 BC Gibixxiti Piraamiid Quufuu jedhamu nugusa Oromoo Quufuu jedhamutu ijaare. Oromoon 7,500 BC keessaa magala Nubiyaa Qaramaa jedhamutii qaroomaa hojechu calqabe. Qaramaan magala Oromoo isa calqabaati. Inni dhumaa Marroo jedhama.
Oromoon Abbaa Haadhaa Addaamifii Hawaan. Maqaan Maqaan Addam Adaamaa dha. Magaalli Nazireet-Adaamaa asirra dhufe. Adaamaa jechuun namaa guddaa jechudha. Adaamaafii Hawaan 4000BC keesaa dhalatan. Akka ragaa baayeen mirkaneesutti isaan otoo hindhalattin wagga dheraa duraa Oromoo abbaa Afrikaafii Eeshiyaa taeen biyya bulchaa turee. Seenaa ajaaibaa kana fakkatuu seenaa ilmoo namaa keessaati barraahee himbeeku.
Raagaa qabatamaa macaafa ani Oromoon hundee ilmoo namaatii jedhee barreesee dubbiisaa seenaa dhugaa baradhaa uummaata barsiisaa seenaa awalamee boollaadhaa bahee adunnatii agarsiisufi qabshaa. Oromoon hortee Kushi jechuu dhiisa. Kushi hortee Oromooti jedhaa.
horii buli, kitaabni kun barreeffamee nama hundumaa oromoo ta’eef adunyaa qaqqabuu qaba.